Uncategorized – Swasthya Samachar
January 1, 2020 June 23, 2020 Editor स्वास्थ्यसमाचार
क्रिमसन अस्पतालद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ती
December 21, 2019 December 22, 2019 Editor स्वास्थ्यसमाचार
स्वास्थ्य समाचार अनलाईन साईटमा हार्दिक स्वागत छ । हामीलाई सामाजिक संजालमा www.facebook.com/SwasthyaSamacharOnline र युट्युव च्यानलमा पनि Swasthya Samachar Online लेखेर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । हामीले विशेषत पाँच नं. प्रदेशबाट स्वास्थ्य र स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष खबरहरु पस्किदै आएका छौं । रुपन्देही मिडिया नेटवर्कद्वारा संचालित यस क्षेत्रकै एकमात्र अनलाईन स्वास्थ्य खबरपत्रिका हो स्वास्थ्य समाचार नेपाल । हामीलाई सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनको लागी ईमेल ठेगाना रहेको छ [email protected]
स्वास्थ्यसमाचार । गुल्मीको रुपाकोटको बाटोघाटो, घर -आँगनमा मानसिक बिक्षिप्द मन लिएर डुलीरहने , आफुलाई श्री कृष्ण भगवानको रुप भन्न रुचाउने र हातमा लगाएका प्लास्टिकका बालालाइ संखौंको मुल्यबोध गर्दै र आफुले टेक्ने सामान्य लौरोलाइ सुनको लौरो बताउने देख्दा मानसिक रोगी मान्छे तर अध्ययनले पीएचडी हासिल गर्न सफल व्यक्ति हुन् पीएचडी बाबा । धेरैले धेरै बर्ष यता देख्दै र यो मान्छे त् यस्तै हो भनेर हिड्ने हरुको अगाडी गुल्मीका केहि पत्रकार मित्रहरु चाँसो राखे, बिशेषत भुवन भुषाल र टिमले उनको भिडियो फ्लोअप शुरु गरे । युट्युबमा भिडियो राखे । भिडियो देश विदेश…
स्वास्थ्य सेवा मानव जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा सेवा प्रदान होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। यति हुँदा हुँदै पनि सामान्य रुपमा उपचार गर्न आएको बिरामी उपचारकै क्रममा अचानक मृत्युको मुखमा पुग्छ । यसले मृतकको परिवारलाइ स्तब्ध बनाउने त भयो नै यो कुरा थाहा पाउने सबैको मुखमा हुन्छ- राम राम कस्तो डाक्टर, थुक्क अस्पताल ! के थाहा कुनै उपचार सामान्य भएर पनि डाक्टरको लापरवाहीले जटिल बनिदिन्छन त कतिपय उपचार जटिल भएपनि डाक्टरको साबधानीले चमत्कारिक रुपमा सुधार र निको हुन्छन । यो रहस्य सर्बसाधारणले कसरि जान्ने ? कसरि डाक्टर…
स्वास्थ्यसमाचार /एपेन्डिक्सको उपचारत एक १७ वर्षीया युवतीको ज्यान गएको छ ।गुल्मी रेसुङ्गा नपा-८ की लक्ष्मी रसालीको ‘एपेन्डिक्स’को शल्यक्रिया गर्ने क्रममा लुम्विनी मेडिकल कलेज प्रभासमा रक्त नशा फुटेको थियो । ओभरफ्लो भई पेटमा जमेको रगत सफा गरेर नशाको शल्यक्रियाको लागी लुम्विनी मेडिकल कलेजको चिकित्सक सहितको टोली भैरहवा मेडिकल कलेज पुगेको थियो । भैरहवामा उपचारको क्रममा रसालीको ज्यान गएको हो । मृतकको परिवारले सामान्य अवस्थामा उपचारत रसालीको उपचारको क्रममा चिकित्सकको लापरवाहीले ज्यान गएको बताएको छन् । चिकित्सकहरुले भने उपचारको प्रयास गर्दागर्दै समस्या जटिल भएकोले युवतीको ज्यान बचाउन नसकिएको बताएका छन्।
स्वास्थ्यसमाचार अनलाईन कार्तिक ९, काठमाण्डौं । सरकारले यस आर्थिक वर्षको लागि देशका विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकिमा कोल्ड चेन उपकरण भित्राउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोल्ड चेन अप्टिमाइजेसन प्लान परियोजना अन्तर्गत नेपालका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा यथासिघ्र जडान कार्य थाली खोपलाई अझै व्यवस्थित र सहज रुपमा नेपाली जनताको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको हो । खोपको गुणस्तरीयता, ढुवानी तथा स्टोर कार्यमा कोल्ड चेन उपकरण अन्तर्गत रेफ्रिजेरेटरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले बताए । उक्त उपकरणको संचालन भएपछि बिरामी खोपकै…
स्वास्थ्यसमाचार /स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लगातारको वर्षाका कारण आइरहेको बाढी पहिरोका कारण आउन सक्ने महामारी तथा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ। केन्द्रका प्रमुख चुडामणि भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा संघमा ४ जना र प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक जना सम्पर्क व्यक्तिको नाम र नम्बर उल्लेख छ। प्रदेश ५ मा डा उमा शंकर चौधरी, लाई तोकेको छ । केन्द्रका प्रमुख चुडामणि भण्डारीले पहिरोका कारण आउन सक्ने महामारी तथा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकीएको बताए ।डा चौधरी समाजीक बिकास मन्त्रालय प्रदेश नं ५ का स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख…
बिजुली चम्केको बेला सतर्क रहनु पर्छ। 1:- फोन, कम्प्युटर, रेडियो, टेलिभिजन जस्ता विद्युतीय सामग्री नचलाउने। 2:- विद्युतीय तरङ्ग टिप्न सक्ने फलाम, चिसो वस्तु नछुने। 3:- बिजुली चम्केको केही समय पानी परेको क्षेत्रमा ननिस्कने। 4;- सकेसम्म घरभित्रै झयालढोका बन्द गरेर सुक्खा ठाउँमा बस्ने। 5:- खुला ठाउँमा भए कुनै घर अथवा भवनमा छिर्ने, सम्भव नभए कडा छाना भएको कार, बस वा ट्रकभित्र बस्ने। 6:- सकभर अग्लो पहाड, ढिस्को र रूखमुनि तथा जमीनमा नबस्ने। 7:- धातुका ह्याण्डल, चेन भएका ब्याग, वा अन्य सामान नबोक्ने नछुने। 8:- तारबार, पोखरी, ठूला रुख नजिक नबस्ने। 9:-…
Uncategorized जीवनशैली टिप्स/जानकारी विचार/ब्लग स्वास्थ्य-टिप्स